Hadda waxaad ku isticmaali kartaa dhammaan muraayadaha indhaha mobiladaada adiga oo adeegsanaya PS Camera | Androidsis
PS Camera waxay isku taagtay barnaamijka ugu fiican ee miirayaasha hadda kujira moobil. Dhowr saacadood ka horna waxaa lagu cusboonaysiiyay laba astaamood oo cusub oo muhiim ah: hadda waad isticmaali kartaa muraayadaha kale ee kamaradaha mobilkaaga iyo saacad loogu talagalay tirinta ka hor intaadan qabsan.
Adobe waa oo gacanta ku haya barnaamijkan cajiibka ah in mahadsanid Adobe Sensei (Teknolojiyadda Sirdoonka Cilmiga ah ee Adobe), waxay awood u leedahay inay ku dhowaato waxyaabo sixir ah. Waxaan ogaaneynaa qeyb kamid ah wararkaas.
Iyo inkasta oo ay u ekaan karto doqonimo ah oo aan hadda u isticmaali karno miiska, Waa in la sheegaa in aan wajaheyno barnaamij suuqa soo galay oo leh fikradda ah in wax laga beddelo qaybta sawir-celinta sawir-gacmeedka ee barnaamijka moobiilka. Taasi waa, fikradda ugu weyni waa dhammaan miirayaashaas oo ay na siiso inaan beddelno oo keliya cirka sawir ama in sawirradu u muuqdaan kuwo aan weligood hore loogu mahadinin miirayaasha B / W.
ka maxaa ku cusub PS Camera kuwani waa:
La hagaajiyay Awoodda ogaanshaha maadada Sensei si sax ah oo sax ah
Qalabkaas la taageeray, hadda waa la oggol yahay kala beddel muraayadaha indhaha camera aad leedahay
Waxqabadka tirinta saacada ay codsadeen bulshada isticmaaleha ah waa lagu daray
Taageerada 5 luqadood oo cusub: Kuuriya, Talyaani, Ruush, Shiine fudud iyo Shiine dhaqameed
Hagaajinta waxqabadka abka
Saacadaha xitaa wuu ogolaanayaa u kala beddel 3 doorasho: mid ka baxsan, 3 ilbidhiqsi iyo toban. Tan waxaa laga heli karaa xagga sare waana mid ka mid ah waxyaabaha dheeriga ah ee muhiimka ah ee lagu daray cusbooneysiintan. By habka, dalbaday bulshada isticmaala.
Así PS Camera waxay noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno muraayadaha indhaha ee aan ku heysano moobilkeena si looga beddelo muraayadda caadiga ah xagasha ballaadhan iyada oo loo marayo badhan loogu talagalay. Cusbooneysiin xiiso leh oo ku saabsan codsi wax ku ool ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Hadda waxaad ku isticmaali kartaa xagasha ballaaran iyo saacadda sawirrada aad ku qaadatid PS Camera